August 3, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Somaliland ayaa markii ugu horaysay ka hadashay go’aankii xildhibaanada gollaha shacabka ay kalsoonida kagala noqdeen Ra’iisal Wasaarihii dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisii.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Gaaxnuug ayaa waxa uu sheegay in masuuliyad daro weyn ay ahayd talaabadii ay xildhibaanada gollaha shacabka xilka kaga qaadeen Xasan Cali Khayre oo shaqo badan ka qabtay dalka.
Wasiir Gaaxnuug ayaa sheegay go’aankaas deg dega ahaa uu aduunka oo dhaqan iyo Somaliland ku noqday la yaab isla markaasna uu ahaa mid ay ka muuqato masuuliyad daro.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland ayaa waxaa uu nasiib daro ku tilmaamay in 30 daqiiqo gudahood ku dhacdo xukuumaddii federaalka ay Somaliland wada hadalka kula jirta.
Waxaa kaloo uu sheegay isaga oo hadlkiisa sii wata Wasiir Liibaan Yuusuf Gaaxnuug in Somaliland aysan wax isbedel ah ku yeelan doonin xilka qaadista Xasan Cali Khayre, hayeeshee uu dowladda Somalia kala dhaxeeya Somaliland wada hadalo.